2017 « A.S.M.A
အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးဘုရားမှ (ASMA) ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်းနိုင်ငံ) သို့ US ဒေါ်လာ 4000 လှူဒါန်း။
အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ US$ 4000 လှူဒါန်းမှူပြုလုပ်နေစဉ်
12.2.2017 နေ့တွင် ASMA ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်းနိုင်ငံ)၏
သြဝါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တော်မူသော အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ
ပညာရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် ASMA ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့သို့ US ဒေါ်လာ 4000 လှူဒါန်းပါသည်။
ASMA ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့သည်​ ထိုင်းနိူင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် BA. MA. MBA. M.Ed. PhD တန်းများ ကို တက်ရောက်နေကြသော ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ကြီး တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုလှူဒါန်းမှုကို ASMA ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့၏
ဥက္ကဌဆရာတော်ဦးသုဝဏ္ဏ ဒု-ဥက္ကဌဆရာတော် ဦးဝံသပါလတို့မှ
အသင်းသားရဟန်းတော်များ အားလုံး၏ကိုယ်စား အလှူခံရယူပြီး
ဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့်တကွ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဒါယကာ-ဒါယိကာမများအားလုံး
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ္မာ ချမ်းသာပြီး လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြီးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ ASMA ကျောင်းသား
ရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ မေတ္တာပို့သ အပ်ပါသည်။
ASMA-နာယကဆရာတော်နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်များမှ လက်ဆောင် အလှူခြင်း ဆက်ကပ်လှူဒန်းစဉ်
ASMA ၏တံဆိပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လွယ်အိတ်အား ဆရာတော်ကြီးအား ဆက်ကပ်နေစဉ်
အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပညာရေးရန်ပုံငွေအတွက် US ဒေါ်လာ-၄၀၀၀ (လေးထောင်)လှူဒါန်း
3:42 AM Share: